musha Africa Efe Ajagba Yevechidiki Nyaya Yevechidiki uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeNigerian Boxer ane zita rekuti “Iye Mumwe Chete". Yedu Efe Ajagba Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezvinoitika zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve yake inotyisa kurudyi-ruoko chibhakera. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Efe Ajagba's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Efe Ajagba Yehuvana Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Punch Tonga Efe Ajagba akaberekwa pazuva re22nd raApril 1994 mutaundi reUghelli muDelta State, Nigeria. Ndiye mumwe wevana vana akazvarwa kuvabereki vake Mr naMai Samuel Ajagba.
Nyika yekuNigerian yeUhrobo dzinza nekumaodzanyemba kwemhuri yeNigerian kwakakurira kuguta rake rekuzvarwa muUghelli kwaakakurira pamwe nehama yechikuru inozivikanwa uye hanzvadzi mbiri diki dzakanaka - Loveth naJoy Ajagba.
Kukura mumhuri yepakati-yemhuri mamiriro eUghelli, mudiki Ajagba aive akarota-zuva aigara achifungidzira nezve tarisiro yekuve nyeredzi mutambi.
Nekudaro, kugamuchira kana kukanda zvibhakera zvaive kure nezvaaishuwira iye.
Efe Ajagba Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Panguva iyo Ajagba yaive pakati pekuita nedzidzo yake yepuraimari kana yepuraimari, aive akaiswa mari zvakanyanya mukukwirira nekureba uye akakwikwidzana nevana vaive nemakore akati wandei kumupfuura.
Pana 11, Ajagba akazove nhengo yekupedzisira pane timu yenhabvu yekumusha kwake uye akatora mutambo uyu zvakanyanya kuburikidza nemazuva ake ekusekondari kana kusekondari.
Nekudaro, mikana yake yekuwana budiriro munhabvu yaive yakati rebei nekuti akange asina godfather kana chinongedzo chakakodzera chekumuvhurira mikova.
Ajagba akazotanga kuvaka basa retsiva mu2011 mushure mekunge imwe yeshamwari dzake dzepedyo ataura naye mazviri.
Zvikonzero zvezano reshamwari hazvina kure kutorwa nekuti aicherekedza simba guru raAjagba rakagadzirwa kubva pamakore ekuchera huni nekuchengetedza iro basa rakaoma rekushanda mubhekari.
Efe Ajagba Yekutanga Yehupenyu Hupenyu:
Makore matatu chete mushure mekutora bhokiseni, Ajagba yakave yakaipa, inotyisa uye inotyisa murwi wekurudyi nemabhatani aibatanidza vamwe vaaitiurs boxer uye yakatumira vamwe vazhinji mumamiriro ekudonha kwechikara.
Saka zvaisashamisa kuti Ajagba akawana rukudzo rusingawanzo rwekumiririra Nigeria kumitambo yeCommonwealth ya2014 kuGlasgow uko kwaakatora menduru yendarira pachiitiko ichi uyezve, akazohwina Goridhe iyo 2015 All African Games yakaitirwa muCongo Brazzaville.
Efe Ajagba Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Gore ra2016 raive shanduko muhupenyu nekusimuka kwaEfe Ajagba paakazove iye chete mutambi wetsiva anomiririra Nigeria kuRio 2016 Olimpiki.
Akaenderera mberi kumaquarterfinal echiitiko ichi aine chiitiko chinokwezva icho chakabata zvido zvemutungamiriri weheavyweight maneja Shelley Finkel.
Ajagba akakoshesa zvido zvaFinkel izvo zvaida kuti aende kuUS uko kunodzidziswa zvirinani uye nemikana mizhinji yakawanda.
Nekudaro, iye anokurumidza-kusimuka wetsiva akagara muHouston Texas, akazviisa pasi pekuboora kwa murairidzi Ronnie Shields uye akashandura hunyanzvi muna 2017.
Efe Ajagba Biography - Simuka Mukurumbira Nhau:
Nguva yacho payakakwana, Ajagba akaita hunyanzvi hwake kutanga musi wa30 Chikunguru 2017 mukugogodza kurwisa United States 'Tyrell Herndon.
Akaenderera mberi nekuhwina kuhwina kumwe pamusoro pemakore maviri akatevera uye akasimuka kuita mukurumbira munzira dzisingaenderane nekukunda kurwa kwakapera kusati kwatombotanga.
Kubudirira kusingawanzoitika kwakaitika apo mupikisi waAjagba Curtis Harper akarambidzwa kufamba kunze kwerin'i sekondi mushure mekunge bhero rarira.
Kunyangwe Harper inoodza moyo danho richizivikanwa zvakanyanya kunge rakagadzirwa mukuratidzira pamusoro pemubhadharo, zvakadaro zvakaita kuti Ajagba ave muridzi weakakunda kukurumidza kukunda munhoroondo yetsiva.
Nekukurumidza mberi kusvika kunguva yekunyora, Efe Ajagba inokurumidza kuva boxer riri pachinangwa chekupera Anthony Joshua's kuzvimiririra kwekuve mumwe weakanakisa emazuva ano vatambi vetsiva vakabuda muNigeria.
Chero ipi nzira iyo mhanza inomukomberedza, iyo yakasara, sezvavanotaura, ichagara iri nhoroondo.
Efe Ajagba Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Kure kure nehupenyu hwake hwekuita basa, Ajagba ane hupenyu hunonakidza uye hune godo rerudo nemukadzi wake Tiya Renee.
Kunyangwe zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa nezvekuti vaviri vacho vakasangana sei ndokuroora, vanotaridzika zvakakwana kune mumwe nemumwe uye vanogovana zvakawanda zvakafanana.
Asati asangana naTiya, Efe aizivikanwa kuti akange aine vasikana vekare kana iye asina vanakomana (s) nemwanasikana (vasikana) vasina muchato.
Iye wetsiva anongova nemwanakomana mumwe chete - Ejiro Tiyon Ajagba kubva kumuchato wake naTiya. Pamwe chete, vanoita mhuri diki yakanaka ine nzvimbo yekuwedzera kwakanaka.
Efe Ajagba Hupenyu hwemhuri:
Mazhinji nyanzvi dzetsiva dzakakura pahupenyu hwemhuri uye Efe Ajagba haisi iyo yakasarudzika. Tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaAjagba pamwe nekuratidza zvinyorwa zviripo zvemadzitateguru ake.
Nezve baba vaEfe Ajagba:
Mr Samuel Ajagba ndibaba vane rudo wetsiva. Aimbove mutambi wetsiva asati asiya pamutambo. Mushure meizvozvo, Samuel akashanda kukambani yemuno yekumabhotoro kusvika pamudyandigere.
Sababa vane hanya, Samuel pakutanga aipokana nesarudzo yemwanakomana wake yekuva mutambi wetsiva. Nekudaro, iye munguva pfupi akawana zvikonzero zvekupa Efe rutsigiro rwake rusingashande mushure mekunge mutambi wetsiva atanga kurekodha kubudirira mukukwakuka nemuganhu.
Nezve amai vaEfe Ajagba:
Amai vane rudo wetsiva vakangozivikanwa saMai Samuel Ajagba. Iye ndewemhuri diki anozivikanwa midzi uye anga ari mbiru yakasimba yekutsigira kusimuka nekusimudzira kwaAjagba munzira dzakawanda.
Nekuda kweizvozvo, Ajagba anowanzoshaya mukana wekumupemberera kuburikidza nehukama hwake hwezvematongerwo enyika panguva dzekupemberera vanaamai zuva.
Anotarisirawo mukana wekumuunza iye nevamwe vemhuri yake kuAmerica pese paanorwira zita.
Nezve hama dzaEfe Ajagba:
Ajagba ine isingasviki 3 hama. Ivo vanosanganisira mukoma wake mudiki anozivikanwa uye hanzvadzi mbiri diki dzinozivikanwa saLoveth naJoy Ajagba.
Iwo hanzvadzi dzakafanana vakagara vaine hukama hwepedyo nevakakurumbira tsiva hombe-hama kubva pahupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Ivo vari zvakare kutsigira kwake kuyedza sezvinoonekwa nemabatiro avanoisa ake ekurwa mashedhi pasocial media uye kupemberera kukunda kwake.
Kuenderera mberi kuhupenyu hwemhuri hwakawedzerwa hwaEfe Ajagba, hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezvezvizvarwa zvake kunyanya sekuru naamai vake pamwe nasekuru nasekuru nasekuru.
Saizvozvowo, hapana zvinyorwa zveababamunini vevabhokisi, babamunini uye babamunini ivo vazukuru vake nanasekuru vachiri kuzivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Efe Ajagba Hupenyu hweMunhu:
Kune vanhu vashoma chete vanoziva nezve hunhu hwaEfe Ajagba kupfuura zvaanoedza kuita tsiva. Gara kumashure apo isu tichifukunura chokwadi nezve iye wetsiva wenyaya uyo unonyanya kutsanangurwa neTaurus zodiac maitiro.
Iye anoda chinzvimbo, anofamba-famba, asingazungunuke uye zvine mwero anoburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwega uye hwepamoyo.
Zvinodiwa netsiva uye zvinokuvaraidza zvinosanganisira kuona mitambo yenhabvu, kuchovha bhasikoro uye kushandisa nguva yakanaka neshamwari uye nemhuri.
Efe Ajagba Mararamiro:
Taura nezve maitiro Efe Ajagba uye anoshandisa mari yake, iyo yakaunganidzwa yemari yake yakakosha inotora kwaakabva kubva pamari yaanotenga yekuhwina mabheji uku dzimwe nzvimbo dzepfuma yake mari yemari yakawanikwa kubva kumabhizimusi eAdidas.
Kunyangwe kuongororwa kwekushandisa mari kwaAjagba mukutenga zvinhu zvakaita semota nedzimba zvichiri kuongororwa, anorova vateveri seanorarama hupenyu hwoumbozha paanozopedzisira atora zita sezvinoonekwa mudhara rake rekutumira mafoto emota yake yepamberi paWitter. .
Efe Ajagba Untold Chokwadi:
Kupedzisa yedu Efe Ajagba nyaya yehucheche uye biography, hezvino zvisingatauriki kana zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi izvo zvisina kana kuiswa mune yake biography.
Kunyangwe Efe Ajagba asingape inklings kune chitendero chake panguva yekubvunzurudzwa, izvo zvisingaiti zviri kwaari kuti ave muKristu. Anorumbidza kubva mumhuri yemhuri uye anoroora mukadzi wechiKristu.
Hongu Ajagba - nehurefu hwe1.98m - haina hunyanzvi hwemuviri panguva yekunyora iyi bio. Nekudaro, hapana kutonga kunze kwekuti anogona kuwana maatatoo kana iye pakupedzisira akahwina zita uye akazove ane mukurumbira mukurumbira.
Ajagba haina kupihwa kuputa fodya kana yekuzvivaraidza inhalants, uye haana kuwanikwa achinwa panguva yekunyora. Akafanana nevamwe varatidziri, anoziva hutano hwake uye anotarisira kukohwa mibayiro yehupenyu hune hutano.
Thanks for reading vedu Efe Ajagba Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!